के राम्रो पाठक असल प्रेमी हुन सक्लान् ? | साहित्यपोस्ट
इन्डिपेन्डेन्ट प्रकाशित २७ बैशाख २०७८ ११:५९
कुनै पाठकको कुनै व्यक्तिको पठनसूची हेरेर उसप्रति प्रेम गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा पुग्छ होला ? तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा कुनै स्त्री वा पुरूष देख्नुभयो, उससित साथी बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा उसले सामाजिक सञ्जालमा राखेका किताबहरू बारेको धारणाले साथी बन्ने वा नबन्ने, साथी भइसकेपछि उससित प्रेम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा कत्तिको प्रभाव पार्ला ?
यस्तो दोधारको अवस्थामा तपाईं पक्कै पर्नु भएको होला कहिलेकाहीँ । यस्तो अवस्थामा संसारका धेरै पढाकूहरू पर्ने गर्छन् । त्यसो हो भने तपाईं मात्र एक्लो हुनुहुन्न है ! इहार्मोनी नामक डेटिङ एपका अनुसार तपाईंले पढ्ने गरेको पुस्तकहरूको सूचीले तपाईंको प्रेमजीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनसक्छ ।
हालै यो डेटिङ एपले गरेको सर्भेअनुसार किताब पढ्न रूचि राख्नेहरूले जति बढी किताबको नाम राखेका छन्, तिनप्रति बढीभन्दा बढी केटा वा केटीले प्रोफाइल खोलेर हेरेको वा ती प्रति रूचि देखाएको पाइएको छ ।
कुनै केटाले बढीभन्दा बढी किताबका बारेमा चर्चा गरेको छ भने केटी आकर्षित हुने र केटीले त्यस्तो गरेको छ भने केटा आकर्षित हुने गरेको पाइएको हो । कुनै केटाले किताबहरूको चर्चा गर्दा अन्य नगरेको तुलनामा १९ प्रतिशत बढी चासो राखेको पाएको देखिएको हो । केटीले कुनै किताबको चर्चा गरेको छ भने केटाहरूबाट २१ प्रतिशत बढी चासो पाउने गरेको देखिएको छ ।
तुलनात्मक रूपमा पढाकूहरू बढी विश्वासिला हुने, सम्बन्धमा खुलापन चाहनेजस्ता गुणहरू पनि पाइएको डाटाले देखाएको छ ।
द इन्डिपेन्डेन्ट १३ जेष्ठ २०७७ २२:४४
रोचक त के छ भने जसले अलि बढी भद्दा शीर्षक भएका किताबको नाम आफ्नो प्रोफाइलमा राखेको छ र जसले गैरआख्यानका पुस्तकहरूको चर्चा गरेको छ, तिनलाई अझ बढी लाइक आउने गरेको छ । जस्तो कि रिचर्ड ब्रान्सनको ‘स्क्र्यु इट, लेट्स डु इट’, ‘लाइक अ भर्जिन’ आदि । ती किताबको चर्चा गर्नेहरूमध्ये ७६ प्रतिशत बढीले तिनलाई पछ्याएको पाइएको छ । तर सँगैमा आख्यान पढ्नेहरूलाई पछ्याउने संख्या भने तुलनात्मक रूपमा कमै देखिएको छ ।
जस्तो कि, जसले प्रोफाइलमा ‘द गर्ल विद द ड्रागन ट्याटु’ (३६ प्रतिशत), ‘१९८४’ (२१ प्रतिशत), ‘द दा भिन्सी कोड’ (५ प्रतिशत)ले पछ्याएको पाइएको छ ।
महिलाहरूको हकमा चाहिँ ‘द हंगर गेम्स’ शृङ्खला पढेको छु भन्नेहरूलाई ४४ प्रतिशत बढीले लाइक गरेका छन् । त्यस्तै ‘द गर्ल विद द ड्रागन ट्याटु’ (३१ प्रतिशत), ‘अ गेम अफ थ्रोन्स’ (३० प्रतिशत)ले बढी मन पराएका छन् ।
त्यसो त किताबका बारेमा चर्चा गर्ने सबैलाई रूचाइन्छ भन्ने पनि छैन । जसले बाइबल सबैभन्दा मन पर्ने किताब भनी लेखेको छ, उसलाई रूचाउनेको संख्या ज्यादै न्यून देखिएको छ । त्यस्तै ‘फिफ्टी सेड्स अफ ग्रे’ मन पराउने महिलाहरूले १६ प्रतिशत कम म्यासेज पाउने गरेका छन् । त्यस्तै ‘ह्यारी पोटर’ शृंखला रूचाउने पुरूषहरूले भने ५५ प्रतिशत कम म्यासेज पाउने गरेका छन् ।
हुन त यो बेलायती डेटिङ वेबसाइटले आफ्नो देशबासीहरूमाझ गरेको डाटा विश्लेषण हो । संसारका सबै मुलुकमा यस्तै परिणाम आउँछ भन्ने छैन । तर निश्चित चाहिँ के हो भने पढाकूहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण भने नपढ्नेहरूभन्दा अलि फरकै हुन्छ । तिनले बढी चासो पाउँछन् नै !
इन्डिपेन्डेन्ट1 लेखहरु9comments